ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ Archives - Page 25 of 26 - News @ M-Media
နာဂျီဘ် မာဟ် ဖော်ဇ် (အီဂျစ်) – စာပေရေးရာ နိုဘယ်ဆု ၊ ၁၉၈၈
မွေး – ၁၉၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ မွေးဖွားရာနေရာ – ကိုင်ရို ၊ အလ်ဂျမာလီယာဒေသ ကွယ်လွန် – ၂၀၀၆ သြဂုတ် ၃၀ လူသိများရခြင်းအကြောင်း – ၁၉၈၈ ခုနှစ် စာပေဆိုင်ရာ[Read More…]
July 24, 2012 — ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ
အမေရိကန်မှ ပထမဆုံး လူမည်းမွတ်စလင် မြို့တော်ဝန်
Clearance Jack Ellis ကို ၁၉၄၆-ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၆-ရက်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူဟာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင် နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် မေကွန်မြို့ရဲ့ မြို့တော်ဝန်အရာရှိဟောင်းပါ။ အမေရိကန် လေထီးခုန်တပ်မှာ နှစ်ပေါင်း-၂၀ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာလည်း[Read More…]
July 10, 2012 — ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ
Fareed Zakaria ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
Fareed Zakaria ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? သူဟာ ဒီကနေ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာလောကမှာ ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးပါ။ သူဟာ လက်ရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသားပါ။သူဟာ ‘တောင်အာရှနွယ်ဖွား’ (ယနေ့ မြန်မာအများစု အခေါ် ကုလား’) ဆိုရင် စာရှုသူ ပိုစိတ်ဝင်စားသွားမလား?[Read More…]
July 3, 2012 — ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ
ပြီးခဲ့သော စနေ့နေ့ည က ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သော ပရီးမီးယားလိဂ် နယူးကာဆယ်နှင့် မန်ချက်စတာ စီးတီး ပွဲစဉ်တွေင် မန်ချက်စတာစီးတီး ကွင်းလယ်ကစားသမားသည် ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ ပရီးမီးယားလိဂ် မွတ်စလင်မ် ဘောလုံးစူပါစတား ယာယာတိုရေးသည် ပွဲစဉ်တစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးအဖြစ်[Read More…]
May 8, 2012 — ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ, နိုင်ငံတကာသတင်း
၂၀၁၁ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် ရီမန်သူ မွတ်စလင်မ် အမျိုးသမီး Tawakkol Karman
ဆွီဒင်လူမျိုး တစ်ဦးဖြစ်သည့် Alfred Nobel ဆိုသူ ကမကထပြု တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ နိုဘယ်ဆုကို ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဆုပေါင်း ၉၂ ခုကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နိုဘယ်ဆုမှာ အမျိုးအစားခွဲ ၆ ခု[Read More…]
December 13, 2011 — ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ, ဆောင်းပါး, နိုင်ငံတကာသတင်း